saameyn intee le’eg ayeey ku yeelatay Barcelona bixitaankii Neymar Jr? – Bartomeu ayaa ka jawaabaya – Gool FM
saameyn intee le’eg ayeey ku yeelatay Barcelona bixitaankii Neymar Jr? – Bartomeu ayaa ka jawaabaya
Dajiye March 10, 2020
(Barcelona) 10 Mar 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa sheegay in u dhaqaaqistii Neymar Jr ee Paris Saint-Germain sanadkii 2017 inay wax weyn ka caawisay siyaasada kooxda reer Catalonia ee dhanka suuqa kala iibsiga.
Barcelona waxay ku tiirsaneyd ciyaartoyda da’ayarta ah ee ka tirsan Akadeemiyada La Masia, mana aysan ku bixin jirin lacago badan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, laakiin dhawaanahan lacagaha ay kooxda ku qarashgareyso xoojinta safkeeda ayaa noqotay mid aad u weyn.
Wareysi uu ku bixiyay Josep Maria Bartomeu wargeyska “Sport” ee gobolka Catalonia ayaa wuxuu ku sheegay:
“Bixitaankii Neymar wuxuu beddelay qorshihii kooxda ee la soo saxiixashada ciyaartoyda. waxay ahayd inaan si dhaqso leh u helno ciyaartooy, farsamo yaqaanada ma aysan ka laba labeeynin lasoo saxiixashada Ousmane Dembélé”.
“Sidoo kale Andrés Iniesta wuxuu ku dhawaaqay inuu baxayo waxaana ku qasbaneyn inaan la soo saxiixano sidoo kale ciyaaryahan qadka dhexe”.
“Haddii Neymar iyo Iniesta aysan bixi laheyn, lama soo saxiixan laheyn xiddigaha Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembélé, balse waqtigan la joogo waxaan mareynaa marxalad kala guur ah, waxaana heysanaa ciyaartooy ku guuleysatay koob kasta, isla markaana wali sameynaya bandhig fiican, dhowr koox marka ay isbadal ku sameynayaan jiilkooda uma tartamaan horyaalada”.
Siddeed xiddig oo dib ugu soo laaban kara kooxda Barcelona… (Neymar Jr, Icardi iyo kuwo kale)